🥇 ▷ Tani waa sida barnaamijyadan caanka ah looga xado Play Store ✅
Tani waa sida barnaamijyadan caanka ah looga xado Play Store
Dukaanka app wuxuu soosaaraa Google Play Store Waxay u muuqdaan kuwo aan dhamaad laheyn. Xal kasta oo ay bixiso kumbuyuutarrada qalabka weyn ee internetka, maankiisa Machiavellian wuxuu sharaxayaa qaab cusub oo looga xado xogta shaqsiyeed ama lacagta laga helo isticmaaleyaasha aan isha ku hayn. Waxaa jira dalabyo qarinaya xayeysiinta qarsoon iyo adeegsadaha uu adeegsado isaga oo aan ka warqabin; codsiyada u baahan rukhsad oo aan noqonin sida tooshkii ay dalbanayeen, fadlan fiiri fariimahaaga gaarka ah; iyo kuwo kale oo xitaa ka sii caqli badan oo, waxa ka xun, cusub, sida kuwa aan maanta kuu soo qaadanno.
Xatooyo badan oo lacag ah barnaamijyada fudud
Shirkadda khabiirka amniga ah ee SophosLab ayaa hadda ka heshay dufcooyin cusub oo ah barnaamijyo ku yaal Play Store oo ujeedadooda kaliya, ay umuuqato, inay tahay inay ku dallacdo dadka isticmaala lacag aad u fara badan tasiilaadyada mar hore sameyn kara dalabyo aad u jaban ama toos toos ah, sida Baadhitaannada QR code ama xisaabiyaha iskuulka fudud.
Cybercriminals waxay ka faa iideystaan ​​nidaamka lacag bixinta gudaheeda codsiyada (ama lacag bixinta gudaha) oo dhacda waqti tijaabo oo la bixiyay. Codsiyada Play Store badanaa waxay u shaqeeyaan sidan: soo-dejintu waa bilaash, ka dibna waxaad leedahay xirmo aasaasi ah oo qalab iyo xirmo qaddar xilliyeed ah oo aad ku geli karto adoo bixinaya lacag bixin ama tijaabin waqti cayiman oo bilaash ah. Dhamaadka waqtiga tijaabada, isticmaaleha waad ridi kartaa barnaamijka, xiriirinta sidan oo kale ah inaadan rabin inaad sii waddo isticmaalkeeda kana fogaato kharashyo dheeraad ah.
Kani waa sida ay cusbooneysiinta cusub ee rukunka u shaqeyso
Khayaanada waxay u shaqeysaa sidan: markay furayaan dalabka, isticmaaleha waxaa lagu casuumay inuu tijaabiyo muddo aad u gaaban, qiyaastii seddex maalmood. Adeegsaduhu waa inuu galiyaa habka lacagbixinta gudaheeda inta uusan xitaa isticmaalin markii ugu horeysay. Isticmaalaha ma rumeysan in, si aan loogu soo oogin dacwad soo socota bisha soo socota, waa inay si cad ugu sheegaan isaga, kuma filna in la tirtirayo. Marka laga hadlayo codsi fudud oo lagu sameeyo GIFs, isticmaale waxaa lagu soo oogay 215 euro ka dib muddadii saddexda maalmood ahayd. Qaddar, sida aan aragno, gebi ahaanba waa sharci darro, tixgelin dheeraad ah iyadoo la tixgelinayo in tamar la soo bandhigo lagu heli karo qaabab kale oo bilaash ah, xitaa codsiyada Google.
Codsiyadan ayaa durba leh in ka badan 20 milyan oo wax la soo dejiyey ah oo ku jira dukaanka Android Play. Iyagu ma hayaan fayras, taasi dhib ma ahan. Qaabkeeda ‘istiraatiijiyad’ waa in lagu xadgudbo kana faa iideysto shuruudaha diiwaangelinta ee codsiyada. Sababtoo ah tani waa farsamo khiyaano cusub oo hadda soo baxday, shirkadda SophosLab waxay go’aansatay inay ugu yeerto barnaamijyadan ‘Fleeceware’ (laga bilaabo ‘Fleece’, shearing, stripping) sababta oo ah waxay ku dallacaan wax badan, iyo digniin la’aan, adeegsiga bilaashka ah ee kiisas kale oo badan.
Markii Google lagu ogeysiiyay habkan cusub ee xatooyada ‘Fleeceware’ bakhaarkiisa, waxay bilaabeen inay ka saarto qaar ka mid ah codsiyada fuliya. Wadarta, 14 ka mid ah 15 baa laga noqday, soosaarid, kadib, sagaal codsi oo dheeri ah oo leh dabeecad lamid ah, kuwaas oo wali laga heli karo soo degsashada maanta
Warar kale oo ku saabsan… Google Play, Play Store, amniga